Halkuu Kabtanka Man City Ka Baxaya Ee Vincent Kompany Uu Ka Galay Qiimayn Lagau Sameeyay Tobankii Kabtan Ee Premier league Ugu Fiicnaa. - Gool24.Net
Qiimayn lagu sameeyay kabtanadii abid ugu fiicnaa horyaalka Premier league ayuu ka soo muuqday Vincent Kompany oo dhawaan la shaaciyay in uu Man City ka baxayo.
Vincent Kompany ayaa loo arkaa xidigii taariikhda Man City ugu fiicnaa kadib markii uu soo badalay heerkii Sky Blues ee taariikhda kubbada cagta England wuxuuna ka mid yahay kabtanadii ugu fiicnaa.
Kompany ayaa go’aan ku gaadhay in uu ciyaartoy iyo tababare ka noqdo kooxdiisii carruurnimo ee player-manager of Anderlecht halkaas oo uu shaqada ka bilaabi doono marka uu dhaco heshiiskiisa City ee June 30.
Kabtanimo aad u tiro badan ayaa soo maray kubbada cagta heerka kowaad ee Egland waxaana kooxaha Premier league ka soo shaqeeyay ciyaartoy si wayn loogu xishmeeyo hogaamintii ay soo muujiyeen.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa qiimayn lagu sameeyay tobankii kabtan ee abid ugu fiicnaa England iyada oo lagu qiimaynayo wax qabadkii iyo hogaamintii ay kooxahooda u sameeyeen.
10. Wes Morgan-Leicester City
West Morgan ayaa si lama filaan ah u noqday halyay taariikhda kubbada cagta England xusi doonto kadib markii uu kooxdiisa Leicester City ka caawiyay in ay heerka labaad ka soo dalacday sanadkii 2014kii.
Laakiin waxa uu magacan ku helay markii uu laba xili ciyaareed kadib kooxda Liecester City si layaableh uga caawiyay in ay koobka Premier league ku guulaysteen.
Kabtankii Leicester City koobka Premier league ka caawiyay ee Wes Morgan
West Morgan ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii sida layaabka leh Foxes ugu horseeday koobka premier League waxaana lagu qiimeeyay kabtankii 10 aad ee premier League ugu fiicnaa.
9. Steve Bruce-Man United
Steve Bruce ayaa kabtanimadii Man United kala wareegay Bryan Robson intii lagu jiray xili ciyaareedkii 1992/93 kii.
Steve Bruce ayaa ahaa hogaamiye marka uu garoonka ku jiro wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoydii Man United ka caawisay in ay ku soo raaxaysteen waqtigii jiilka dahabiga ahaa.
Laakiin Steve Bruce ayaa noqday hogaamiye Man United ka caawiyay koobankii xili ciyaareedyadii 1993/94 iyo 1995/66 waxaana lagu qiimeeyay kabtankii 9 aad ee Premier league ugu fiicnaa.
Riix 2,3,4 si aad qiimayntan oo dhan uga bogato
Saacid Hasan says:
Xaqiiqdii waa arin loo qaateen ah marka loo fiiriyo shaqsi kasta iyo wax qabad kiisa